Ahoana ny fisafidianana solosaina finday ho an'ny famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Monica sanchez | 06/09/2021 11:41 | maro
Raha milentika amin'ny tontolon'ny famolavolana sary ianao dia mety nahatsapa fa ilaina ny manova ny solosainao finday taloha ho an'ny iray mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Tsy mora velively io asa io, betsaka ny zavatra azonao safidiana ary raha tsy manana teti-bola tena lafo ianao dia tsy maintsy ihomeinao ireo fiasa sasany mety hahaliana ny asanao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianariko ianao hisafidy solosaina finday ho an'ny famolavolana sary ary hitarika anao aho hahafantaranao izay tokony hataonao lohalaharana rehefa manapa-kevitra ianao.
1 Inona no tokony hananan'ny solosaina finday amin'ny famolavolana sary?
2 ny processeur
2.1 Karatra sary
Inona no tokony hananan'ny solosaina finday amin'ny famolavolana sary?
Rehefa mividy a solosaina finday ho an'ny famolavolana sary ianao dia tsy maintsy maka antoka fa mividy iray matanjaka ampy hanohanana ny rindrambaiko izay tsy maintsy ihodinanao raha te hahay hamolavola ianao. Tsy ny solosaina rehetra no vonona hiasa amin'ireo karazana programa ireo ary rehefa apetraka izy ireo dia mirona miadana be. Hofaritako eto ambany izay toetra teknika tokony hozahanao rehefa mividy solosaina findainao.
Ity teny ity dia mety tsy dia toa anao loatra izao, fa ny CPU kosa dia iray amin'ireo singa ilaina indrindra amin'ny solosaina ary, araka ny hevitro, ny toetrany dia tokony ho tapa-kevitra amin'ny fanapahan-kevitry ny fividiananao. CPU no fanafohezana ny "unité d'exploitation central", rehefa miresaka momba ny CPU isika dia manondro ny processeur, ny fitaovana izay tompon'andraikitra amin'ny fandikana ny baiko amina programa informatika.
Raha hisafidy ny solosainao finday dia jereo ireto fikafika teknika momba ny CPU ireto:
Rehefa mamolavola ianao dia hankasitraka fa ireo asa dia vita haingana araka izay tratra. Mandehana amin'ny processeur multi-core miaraka amina core efatra farafaharatsiny.
Ny tahan'ny matetika dia tsy maintsy mitovy na lehibe kokoa amin'ny 3GHz.
Ny karatra graphique dia ampahany amin'ny solosaina manova ny angona nomerika ho angona sary izay efa azo adika amin'ny fampisehoana fitaovana (ny monitor). Izany hoe izy no manome antoka fa afaka mahita ny zava-drehetra miseho amin'ny efijery finday isika.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia misy karazany roa ny karatra sary:
Karatra sary manokana: Izy ireo dia ireo izay azo tsy miankina amin'ny solosaina, na dia misy aza ny mpanamboatra izay misy karatra sary tsy miankina amin'ny solosaina finday avo lenta. Priori dia mety ho safidy tsara indrindra ho an'ny mpamorona sary, satria mamela sary an-tsaina ny sary maranitra sy azo zahana kokoa. Na izany aza, lafo ireto karatra ireto, maka toerana, mamokatra hafanana, ary mandany herinaratra fanampiny, ka tsy mora toy izany ny mampiditra azy ireo amin'ny solosaina finday.
Karatra sary nozaraina: ireo karatra ireo dia efa natsangana ao anaty solosaina finday ary misy solvent ampy hiatrehana ny asa famolavolana sy fanovana. Ny karatra sary zaraina anio dia mahomby ary manome vahaolana avo lenta. Raha ny fahitako azy, raha manomboka eo amin'ny tontolon'ny famolavolana sary ianao dia tsy mendrika ny handany vola fanampiny amin'ny karatra sary manokana, misafidiana solosaina finday miaraka amina karatra sary tsara zaraina amin'ilay nizara.
Matetika izahay dia miantso ny RAM ho "fahatsiarovana amin'ny solosaina." Raha tsy misy fisalasalana, ity dia singa iray lehibe hafa tokony hikajiana rehefa mitady ny solosaina finday mety ho an'ny famolavolana sary, fa ... maninona no tena zava-dehibe?
Ny solosaina dia mitahiry fampahalalana “vetivety” amin'ny RAM, tonga any daholo ny zavatra iarahan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Inona no mitranga rehefa tsy misy toerana sisa ao anaty RAM? Ny solosaina dia mitady toerana hafa hitahirizana izany fampahalalana izany ary hitahiry azy amin'ny kapila mafy.
Ny olana dia miadana kokoa ny fidirana amin'ny kapila mafy ka hiadana ireo asa rehetra izay mila fampahalalana tokony ho ao anaty RAM. Amin'ny famolavolana sary dia matetika ianao no hiasa miaraka amina programa maromaro miaraka amin'izay, ka mila RAM tsara ianao, andramo ny manana 16GB farafahakeliny. Raha afaka mahazo iray miaraka amin'ny hafainganam-pandeha anelanelan'ny 3200 MHz sy 3600 MHz ianao, dia vao mainka tsara kokoa.
Raha te hanokan-tena amin'ny famolavolana sary ianao, dia ny habakabaka no olana matetika indrindrao. Amin'izao fotoana izao ny fividianana kapila SSD dia lafo vidy ary raha ampitahaina amin'ny kapila mafy ivelany dia manana tombony lehibe. Ireo karazana singa ireo dia mahatohitra kokoa ary tsy dia mahazaka tohina loatra. Ho fanampin'izany, haingana kokoa ny fidirana amin'izy ireo, izay hahafahanao manana fitadidy fanampiny tsy hampihemotra ny asanao.
Ankehitriny, raha tsy te hampiasa vola amin'izany ianao ary vao manomboka, dia azonao atao ny manolo ny SSD amin'ny kapila mafy an'ny taloha. Na dia efa mitovy aza ny vidiny.
Ho ahy ity no teboka farany ambany fanapahan-kevitra rehefa miresaka momba ny fomba hisafidianana solosaina finday ho an'ny famolavolana sary. Te hahafantatra ny antony ve ianao? Raha ny fahitako azy, rehefa mividy solosaina finday ianao ary tsy te hiala amin'ny teti-bolanao dia tsy maintsy manilika kely ianao ary ity dia iray amin'ireo fanesorana izay azonao vahana isaky ny maniry ianao fa tsy mila manova. solosaina. Afaka mividy monitor foana ianao hampiasaina ho efijery faharoa.
Tsy handainga aminao aho, ny fananana efijery lehibe misy vahaolana tsara dia mora kokoa amin'ny fiainanao. Noho izany, raha afaka misafidy ianao dia safidio ny haben'ny efijery avo manohana ny vahaolana 1290 × 1080. Raha mieritreritra ny hividy monitor hafa ianao dia mamporisika anao hividy iray izay 27 "na lehibe kokoa ary ny fanapahan-kevitra dia mijanona 1290 × 1080.
Raha mihetsika eo anelanelan'ny masontsivana izay nofaritanay eto, dia afaka mahita maodely solvent tena tsy misy vidiny adala mihitsy ianao. Aza adino koa fa ao amin'ny asanao amin'ny maha-mpamorona sary anao dia mila manana gadget manatsara ny fahaizan'ny fitaovanao ianao.
Ny iray amin'ireo tolo-kevitra tsara indrindra azoko omena anao alohan'ny hamaranana ity lahatsoratra ity dia ny fividiananao takelaka misy sary faran'izay haingana, io no fitaovana ilaina sy sarobidy indrindra ho an'ny mpamorona satria tsy hanafainganana ny fizotran'ny asanao fotsiny izany fa hamela anao hanao asa tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hisafidianana solosaina finday ho an'ny famolavolana sary
Fanesoana karatra fandraharahana 11 hanome aingam-panahy anao